बालिकाको पेट बढ्दै गएपछि खुल्यो यस्तो र,हस्य ! -
बालिकाको पेट बढ्दै गएपछि खुल्यो यस्तो र,हस्य !
८ जेठ, धनकुटा । धनकुटामा १३ बर्षीय बालिका माथि यौ,न शो,षण भएको खुलेको छ । धनकुटा घर भएकी ती वालिका माथि यौ,न शोषण भएको कुरा परिवारलाई सुरुमा केहि थाहा नभएको र बालिकाको पेट ब,ढ्दै गएपछि सोधपुछ गर्दा मात्र यस्तो तथ्य खुलेको परिवारले जनाएको छ ।
सोधपुछको क्रममा वालिकाले आफुमाथि ललाई-फकाई अ,नैतिक क्रियाकलाप गर्दै आएका व्यक्तिहरुको वारेमा वताएपछि यौ,न शोषणको रहस्य खुलेको हो । जसअनुसार यौ,न शोष,णको आ,रोपमा प्रहरीले ३ जनालाइ प,क्राउ गरेको छ ।
बालिकाको आफन्तले दर्ता गरेको मु,द्धाको आधारमा वालिका माथि यौ,न शो,षण गरेको आ,रोपमा आज धनकुटा नगरपालिका ६ का गौरी अत्री, सिरान बजारका देवेन्द्र श्रेष्ठ, कचिडेका भक्त बहादुर मगर प्र,क्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय धनकुटाका प्रवक्त डिएसपी ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरीका अनुसार ती वालिकालाई ललाइफकाई गरी यौ,न शो,षण गर्दै आएको भनी बालिकाको परिवारले हिजो गौरी अत्री ,देवेन्द्र श्रेष्ठ ,भक्त बहादुर मगर, गोकुण्डेश्वर मावि का शिक्षक मदन अधिकारी विरु,द्ध मु,द्धा दर्ता गरेका हुन् ।
प,क्राउ परेकाहरुको म्याद थप गरी अनुसन्धा भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । फ,रार मदन अधिकारीको भने खोजी जारी रहेको डिएसपी श्रेष्ठले वताउनुभयो । अधिकारी अखिल नेपाल विद्यार्थी संगठनको प्रदेश १ महासचिव हुन । श्रेष्ठ सिरान बजारमा खाजा पसल सञ्चालन गर्दै आएकाछन् । अत्री स्थानीय व्यसायी हुन । उनीहरुले लामो समय देखि बालिकालाई ललाइफकाई यौ,न शो,षण गर्ने गरेको परिवारले दिएको उजुरीमा जनाईएको छ ।
यसवारे परिवारलाई पहिला केहि थाहा नभएको र बालिकाको पे,ट बढ्दै गएपछि सोध,पुछ गर्दा मात्रै ती बालिकालाई यौ,न शो,षण गर्ने गरेको रहस्य खुलेको परिवारले जनाएको छ । दलित परिवाकी ती बालिकाको स्वास्थ्य जाँच गर्दा उनि ग,र्भवति भएको खुलेको जनाईएको छ ।
स्वास्थ्य जाचको क्रममा बालिका ग,र्भवति भएको प्रमाणित भएपछि आ,रोपित चारै जना विरु,द्ध मु,द्धा दर्ता गरिएको परिवारले वताएको छ । अहिले बालिकालाई धनकुटामा रहेको पुन;स्थापना केन्द्रमा राखेको र स्वास्थ अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरि कार्यलय धनकुटाले जनाएको छ ।
तपाईलाई यो पोस्ट कस्तो लाग्यो ? तल कमेन्ट बॉक्स मा अबस्य लेख्नुहोला, मनपरे जानकारी शेयर गर्नु होला । थप जानकारीका लागि हाम्रो वेब साइटमा जानुहोस् धन्यबाद ।
← तपाईलाई थाहा छ ? महिलाको गोप्य यौ’न व्यवहार यसरी पत्ता लाग्छ ! पुरा हेर्नुहोस्…
लकडाउनको मौका छोपी, फोटो स्टुडियोभित्रै यौ’ नधन्दा थालेपछी – पुरा पढ्नुहोस… →